सेनाले जिटुजीमार्फत् किनेका मेडिकल सामग्रीमा एक अर्बभन्दा बढी घोटाला! कुन सामानमा कति?
उत्तम काप्री मंगलबार, जेठ २७, २०७७, २३:४५
चीनको गोन्जाओबाट नेपाली सेनाले नेपाल एयरलाइन्समार्फत् ल्याएका मेडिकल सामग्री त्रिवि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अनलोड गरिँदै। तस्बिर : नेपाली सेना
काठमाडौं- कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भन्दै नेपाली सेनाले जिटुजीमार्फत् चीनबाट खरिद गरेका मेडिकल सामग्रीमा एक अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी अनियमितता देखिएको छ। नेपाली सेनाले मेडिकल सामग्री खरिद गरेको मूल्य र हालको बजार मूल्य तथा यसअघि स्वास्थ्य सेवा विभागले ओम्नी ग्रुपसँग किन्नका लागि तयार पारेको सूचीसँग तुलना गर्दा घोटाला भएको देखिएको हो। नेपाली सेनाले जिटुटीमार्फत् खरिद गरेका १५ आइटमका मेडिकल सामग्री तथा मेसिनमा मात्र हालको बजार मूल्यभन्दा १ अर्बभन्दा बढी तिरेको देखिएको छ।
ओम्नी ग्रुपसँग स्वास्थ्य सेवा विभागले खरिद गरेका मेडिकल सामग्रीमा बढी मूल्य तिरिएको भन्दै विवाद भएको थियो। यसपछि स्वास्थ्य सेवा विभागका तत्कालीन प्रवक्ता महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले ‌ओम्नीसँगको सम्झौता खारेज गरी उसलाई कालोसूचीमा राख्दै नयाँ प्रक्रियाबाट सामान खरिद गरिने उल्लेख गरेका थिए।
नेपाल लाइभलाई प्राप्त कागजातमा १५ वटा सामग्री खरिदमै मात्रै १ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी घोटाला भएको देखिन्छ। सरकार आफैँले १५ रूपैयाँमा खरिद गरेको सर्जिकल मास्कमा सेनाले ५१ रूपैयाँ ६० पैसा खर्च गरेको छ। यसैगरी अहिले बजारमा २ सयदेखि २ सय २५ रूपैयाँमा पाइने तथा केही समय अगाडि मात्रै स्वास्थ्य सेवा विभागले २ सय २५ रूपैयाँमा खरिद गरेको एन-९५ मास्कलाई सेनाले ३ सय ५४ रूपैयाँ हालेको छ।
कुन सामाग्री खरिदमा कति बढी?
१. डिस्पोजल प्रोटेक्टिभ क्लोथिङ
सेनाले जिटुजीमार्फत् कूल २ लाख थान डिस्पोजल प्रोटेक्टिभ क्लोथिङ खरिद गरेको छ। २ लाख थान खरिदमा प्रतिथान १९ दशमलव ८० डलर खर्च गरेको देखिन्छ। कुल २ लाख थान खरिदमा ३९ लाख ६० हजार डलर खर्च भएको छ। यही डिस्पोजल प्रोटेक्टिभ क्लोथिङ अहिले नेपाली बजार मूल्य १२ सय रूपैयाँ हाराहारी छ। तर, सेनाले यति धेरै थान खरिद गर्दा पनि प्रतिथान १९.८० डलर अर्थात् नेपाली रूपैयाँ २ हजार ३ सय ७६ रूपैयाँ खर्च गरेको हो।
सेनाले जिटुजीमार्फत् २५ लाख थान सर्जिकल मास्क खरिद गरेको छ। सेनाले एक थान सर्जिकल मास्क ०.४३ डलरमा किनेको छ। २५ लाख थान सर्जिकल मास्कमा मात्रै सेनाले १० लाख ७५ हजार डलर खर्च गरेको छ। हालको विनिमय दर अनुसार यो रकम १२ करोड ९० लाख रूपैयाँ हुन्छ।
सेनाले जिटुजीमार्फत् २ लाख १२ हजार ५ थान प्रोटेक्टिभ एन-९५ मास्क खरिद गरेको छ। प्रतिथान २.९५ डलरका दरले एन-९५ मास्कमा मात्रै सेनाले ६ लाख २६ हजार ८ सय ७५ डलर खर्च गरेको छ।
सेनाले खरिद गरेको मास्कजस्तै एन-९५ मास्क स्वास्थ्य सेवा विभागले खरिद गर्दा प्रतिथान २ सय २५ रूपैयाँ खर्च गरेको थियो। तर, सेनाले एन-९५ मास्क खरिदमा प्रतिथान नै ३ सय ५४ रूपैयाँ खर्च गरेको छ। सेनाले खरिद गरेको मूल्य स्वास्थ्य सेवा विभागले खरिद गरेको मूल्यभन्दा प्रतिथान १ सय २९ रूपैयाँ बढी हो। स्वास्थ्य सेवा विभागले खरिद गरेको मूल्यको आधारमै भन्ने हो भने २ लाख १२ हजार ५ सय थान एन-९५ मास्क खरिदमा सेनालले २ करोड ७४ लाख १२ हजार ५ सय रूपैयाँ बढी खर्च गरेको छ।
सेनाले जिटुजीमार्फत् सेफ्टी बुट ४२ हजार ५ सय थान खरिद गरेको छ। बुट खरिदमा प्रतिथान १६.८० डलरका दरले ७ लाख १४ हजार डलर खर्च गरिएको छ। प्रतिथान २ हजार १६ रूपैयाँका दरले कुल ४२ हजार ५ सय थानका लागि सेनाले ८ करोड ५६ लाख ८० हजार रूपैयाँ खर्च गरेको छ।
कसरी पायो सेनाले मेडिकल सामाग्री खरिदको जिम्मा?